Ogaden News Agency (ONA) – Xarunta AMISOM ee Muqdisho Ay Kuleedahay oo Qaraxyo Lala Beegsaday & Khasaare Kadhashay.
Xarunta AMISOM ee Muqdisho Ay Kuleedahay oo Qaraxyo Lala Beegsaday & Khasaare Kadhashay.
Posted by ONA Admin	/ July 27, 2016
Waxaa laba qarax oo is-xig-xiga lagu weeraray xartunta AMISOM ay ku leedahay magaalada Muqdisho ee Xalane. Xarunta Xalane ayaa ku dhaw garoonka diyaaradaha ee Muqdisho waxaana sidoo kale deggan qaar kamid ah safaaradaha Soomaaliya ay ku leeyihiin dalalka shisheeye.
Qaraxyada ayaa loo isticmaaley gaadhi bom lagu soo xidhey kaasoo ku qarxay Madina Gate oo ah isbaarada ugu horaysa ee Xalane. Qaraxa labaad ayaa ka dhacay goob ay ku sugan yihiin ciidanka nabad sugiddu oo lagu magacaabo Dan-wadaagta. Qaraxyada kadib ayaa la maqlaayey rasaas la is weydaarsanayo, taasoo aan la ogeyn in kooxdii weerarka soo qaadey ay doonayeen in ay gudaha u galanaa Xalane iyo in ay ahayd rasaas ay ridayeen ciidanka AMISOM.
Dad ku dhaw goobta qaraxu ka dhacay ayaa warbaahinta u sheegay in ugu yaraan 10-qof oo mayd ah ay arkeen kuwaasoo ku dhawaa goobta weerarku ka dhacay. Xog warbaahintu ka heshay laamaha amniga ayaa sheegaya in 9-qof oo kamid ah dadkii ku geeriyoodey ay ahaayeen ciidamada ilaalada u ah Qaramada Midoobey kuwaasoo ka socdey dalalka Midowga Afrika.
Afhayeenka AMISOM Joseph Kibet ayaa saxaafadda u xaqiijiyey in weerar la doonaayey in laga dhex fuliyo xarunta Xalane uu fashilmey kadib markii ay ka hortageen gaadhi bom lagu soo xidhay. Waxa uu sheegay Joseph Kibet afhayeenka AMISOM in qasaaraha ka dhashay qaraxyada lagu soo weeraray dib ay kasoo sheegi doonaan.
Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay weerarkan, waxaana ay sheegteen in ay dileen tobanaan askeri oo ajnabi ah. Xarunta Xalane ayaa ah goob si weyn loo ilaaliyo, inkastoo Al-Shabaab ay horey u weerareen kuna dileen Askar ajaanib ah.